Gisella Cardia - Mitandrema! - Countdown ho an'ny Fanjakana
Izahay dia	Gisella Cardia	, 18 aprily 2020:
Zanaka malala, misaotra anao fa tao anatin'ny vavaka ary tamin'ny fihainoanao ny antsoko ao am-ponao. Ry zanaka malala, miadia ho an'ny fahafahanao: ho andevon'ny mpanao jadona ratsy ianao. Mitandrema amin'ny vaksin sy ny adidy rehetra, satria tsy avy amin'Andriamanitra, fa avy amin'i Satana izay te hitantana ny fiainanao sy ny sainao. Ry malalako, horohorontany no ho re manerana izao tontolo izao: nikasika ny tany aho mba hampitandrina ny zanako, mba hahafahan'izy ireo ho vonona amin'ny fotoana mahatsiravina ho tonga. Anaka, ampiasao ny fahaiza-manavaka, fa izao no fotoana izay hisy mpaminany sandoka marobe. Mivavaha betsaka sy tsy tapaka, mino an'Andriamanitra tokana ary manohy mamaky ny Soratra Masina. Zanaka malala, ny finoana ihany no afaka hamonjy anao, aza hadino mihitsy. Ny anjeliko sy Archangels dia ho eo anilanao foana: aza mafana. Ankehitriny dia mitso-drano anao aho amin'ny anaran'ny Trinite Masina: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, Amena.
* Raha jerena ny sazy teo aloha momba ny “fanandevozan'ny mpanao didy jadona ratsy fanahy”, ity dia toa fanondroana ireo drafitra ankehitriny dinihina mba hampifandraisina ireo vaksiny amin'ny fanondroana nomerika manerantany sy tsy maintsy atao (jereo ny ID an'ny2020 an'ny UN). Tsy tokony ho raisina tahaka ny fahitana ireo vaksinina rehetra ankehitriny. Ny teny italiana obblighi, adika eto ho "adidy", azo adika ihany koa ho "fepetra tsy maintsy atao" na "voatery rehetra".
← Ny fandavana ny alahady famindrampon'Andriamanitra
Pedro Regis - Matokia… →